တရုတ်စတင်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆ polyethylene မိမိကိုယ်ကိုကော်ရေစိုခံအမြှေးပါးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Hongyuan
NPS-H Non-bitumen-based polymer self-adhesive film (pre-paved) waterproof membraneThe waterproof membrane is made with pre-paved full bonding installation and does not require full bonding of the protection layer and the structure.1.Product overviewAichuang NPS-H non-bitumen-based polymer self...
NPS-H ကို N ကို On-ကတ္တရာစေး-based ပေါ်လီမာ Self-ကော်ရုပ်ရှင် (Pre-ခင်း) ရေစိုခံအမြှေးပါး
အဆိုပါရေစိုခံအမြှေးပါးကို pre-ခငျးအပြည့်အဝ Bond တပ်ဆင်ခနှင့်အတူဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအလွှာနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်အဝ Bond မလိုအပ်ပါဘူး။
Aichuang NPS-H ကို Non-ကတ္တရာစေး-based ပေါ်လီမာ Self-ကော်ရုပ်ရှင် (prepaved) ရေစိုခံအမြှေးပါးအထူးလုပ်ငန်းစဉ်ရေယဉ်များနှင့်ခရမ်းလွန်ယဉ်ပေါ်လီမာဂျယ်လ်နဲ့အတူစတင်ပေးသည်ဖွငျ့သောပေါ်လီမာရေစိုခံအမြှေးပါးသည်။
2. ကုန်ပစ္စည်း features တွေ
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအလွှာနှင့်အတူ②အပြည့်အဝ Bond: ကမြင့်မားသော Bond ခွန်အားနှင့်ကောင်းသောရေသော့ခတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ကွန်ကရစ်နှင့်အတူအမြဲတမ်း Bond ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသို့ seeping အစိုဓာတ်ကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
③သည့်ရေစိုခံအလွှာရန်အခြေခံအုတ်မြစ်အခြေချကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာကွယ်ခြင်း: အခြေခံအုတ်မြစ်အခြေချနှင့်တကွ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအလွှာရိုးရာရေစိုခံအလွှာကိုက်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ Pre-ခငျးအပြည့်အဝ Bond တပ်ဆင်ခနှင့်အတူပစ္စည်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှောင်ရှားရန်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်မံနိုင်ပါသည်။
④အရပ်ပုသည့်အလုပ်ကိုကာလ: pre-ခငျးအပြည့်အဝ Bond တပ်ဆင်ခအခြေစိုက်စခန်းမျက်နှာပြင်အနိမ့်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပြီးဘုံအမြှေးပါးနဲ့နှိုင်းယှဉ် 1/3 အားဖြင့်အလုပ်ကာလ shortens ။
မြင့်မားသောခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့ Bond အင်အား, transverse-စီးသောရေကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, အဆင်ပြေလျှောက်လွှာ
3. P ကို roduct ခွဲခြားနှင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်
NO ။ အချက် အညွှန်းကိန်း
pre-ကြောကျခငျး P ကို
1 တင်းမာမှု တင်းမာမှု / (N / 50mm) ≥ 500
အမြှေးပါးများ၏ချိုးမှာ elongated% ≧ 400
အများဆုံးတင်းမာမှု /% ≥မှာ elongated -
2 လက်သည်းလှံတံ / N ကို၏အစွမ်းသတ္တိကိုကိုက်ဖြတ်≧ 400
3 Channel ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ် 0.6Mpa, ရေမရှိသောပြေး
Pre-ခငျးအပြည့်အဝ Bond installation ကိုအကြောင်းမဲ့အစိတ်အပိုင်းများသက်ဆိုင်
နောက်တစ်ခု: Valeron Cross-ပုံစံရုပ်ရှင် Self-ကော်ကတ္တရာစေးမြှေးပါး
HS5-fix5.5 (6.3) L ကို
h3-fix5.5 (6.3) L ကို
က S-ပြင်ဆင်ချက် UR သတ္တုမြှောင်
Flexible Polymer အမျိုးအစား-ဘိလပ်မြေ waterproof Coating , Tpo ရေစိုခံအမြှေးပါး, Single-သက်တမ်းထပ်တိုးခေါင်မိုးအမြှေးပါး , ကွန်ကရစ်သည် Polyurethane Coating , acrylic waterproof Coating, ရေတပ်စခန်း Polyurethane waterproof Coating ,
ရေတပ်စခန်း Polyurethane waterproof Coating , Flexible Polymer အမျိုးအစား-ဘိလပ်မြေ waterproof Coating , Single-သက်တမ်းထပ်တိုးခေါင်မိုးအမြှေးပါး , Tpo ရေစိုခံအမြှေးပါး, ကွန်ကရစ်သည် Polyurethane Coating , acrylic waterproof Coating,